Hlaziya iZongezelelo zeMathematika eziSisiseko kunye nokuKhupha iZakhono
Ukuba unokwenza onke amanani ngokudibanisa kunye nokukhupha kakuhle, unazo ezinye izixhobo zokwenza kakuhle kuvavanyo lokubala. Xa ungadibanisa uthabathe uthabathe amanani apheleleyo, unaso kwakhona isiseko esiluqilima sokwenene semathematika eseleyo onokuyifuna kubomi benene. Eyona mizekelo iqhelekileyo yemathematika yemihla ngemihla yongeza ityala lakho lokuthenga kunye nokusebenza notshintsho.
Wena yongeza Izinto nanini na xa ugqiba ngesixa esithile ngaphezulu kokuqala kwakho-umzekelo, ukuba urhola imali, okanye upakishe ubunzima obuninzi kwisutikheyisi yakho, okanye udibanise amaqela amabini abantu.
Ngokucacileyo, ukuba unayo ikhalityhuleyitha, konke okufuneka ukhathazeke ngako kukuqinisekisa ukuba ufaka isixa ngokuchanekileyo.
Kwelinye icala, ukuba uku-non-calculator (i-mental arithmetic) kuvavanyo, kufuneka uyazi ukuba ungongeza njani ngokukhawuleza ephepheni. Nantsi into ekufuneka uyenzile:
Faka umgca amanani ofuna ukuwadibanisa ukuze isiphelo sawo sibe semgceni.
Dibanisa elona kholamu lasekunene.
Ukuba itotali yakho ingaphantsi kweshumi, bhala inani elipheleleyo phantsi kwekholamu. Ukuba itotali ilishumi okanye nangaphezulu, bhala inombolo yesibini phantsi kwekholamu uze ufake eyokuqala phantsi kwekholamu elandelayo ekhohlo.
Kwikholamu esembindini yomzekelo wokuqala, 7 + 6 = 13, ubhala u-3 phantsi ko-7 no-6 kunye no-1 ngezantsi kwekholamu elandelayo ngasekunene.
Yiya kwikholam elandelayo ngasekhohlo uze udibanise amanani - kwaye ungeze nawaphi na amanani owabhalileyo ngezantsi kwale kholamu.
Kwikholamu yasekhohlo yomzekelo wokuqala, 4 + 3 = 7, kukho u-1 ongezantsi kwekholamu ngokunjalo, ngoko ke bhala u-8.
Phinda amanyathelo 3 kunye no-4 de uphelelwe ngamanani.
Wena thabatha okanye Yise kude Nanini na xa ugqiba ngesixa esithile esingaphantsi kwesiqale ngaso - umzekelo, ukuba uchitha imali, okanye ugalela into eselwayo, okanye ususe abanye abantu kwiqela.
Njengakwezona zinto zininzi kwimathematics, zininzi iindlela ezikhoyo zokwenza izibalo zokuthatha kude kunye nokufumana impendulo eyiyo. Apha, uphonononge indlela yokususa indlela yesiko usebenzisa indlela ye- ikholam indlela , kwaye emva koko kungenye indlela, indlela yenza into enye indlela, abanye abantu abayifumana ilula.
Ukuba elinye lamanani kwisixa-mali alinalutho, kuya kufuneka usebenzise indlela eyahlukileyo. Jonga ukudibanisa nokuthabatha amanani a-negative.
Nantsi indlela esebenza ngayo ikholamu:
Ukuba inani lesibini likhulu kuneli lokuqala, tshintsha ujikeleze kwaye ubhale uphawu lokususa olukhulu kwenye indawo ongayi kuliphosa. Impendulo yakho izakuba ngaphantsi kuka-zero, okanye inani elingelilo.
(Ngethamsanqa, oku kunqabile kwiimvavanyo zolwazi lokubala.)
Bhala amanani akho ngomkhulu ngaphezulu ngentla encinci. Ukuba zide ubude, qiniseka ukuba zichanekile-ukuba ziphela kwikholamu efanayo. Krwela umgca kwinani elisezantsi. Zinike indawo eninzi!
Ukuqala ngasekhohlo, thelekisa amanani asezantsi nala aphezulu.
Ukuba inani elingezantsi likhulu, ke unengxaki. Kuya kufuneka uboleke enye ukusuka kwikholam elandelayo ukuya ekhohlo.
Nciphisa inani eliphezulu lekholamu elandelayo nganye kwaye ubhale enye encinci ngasentla nasekhohlo kwinani eliphezulu-umzekelo, kwikholam yasekunene, u-3 ubengu-13.
Ngoku susa inani elingezantsi kwinani eliphezulu uze ubhale impendulo engezantsi komgca okoluhlu.
Phinda amanyathelo 2 kuye ku-4 de uphelelwe ngamanani.
Ukuba awubhalanga phantsi kususwe umqondiso omkhulu kwiNyathelo 1, impendulo yakho linani elingaphantsi komgca. Ukuba ubhale umqondiso omkhulu wokuthabatha, beka thabatha phambi kwenani ngaphantsi komgca okrwelekileyo kwaye yimpendulo yakho.
Kwenzeka ntoni ukuba ufuna ukuboleka kwi-zero? Awunakunciphisa nto ngenye! Kwimeko apho, into ekufuneka uyenzile kukuboleka enye kwi Okulandelayo ikholamu ngasekhohlo, uguqula i-zero ibe lishumi, ukuze ukwazi ukuboleka enye kuyo.
Nantsi indlela yenza into enye indlela isebenza:
Bhala phantsi isibalo.
Kuqala, ufuna ukwenza inani lesibini libe lizi-10.
Jonga kwidijithi yayo yokugqibela uze ujonge ukuba zingaphi ekufuneka uzidibanisile ukuze iphele ngo-0. Yongeza eli nani ku Zombini uze ubhale phantsi isixa esitsha. Ukuba ubunama-435 - 79, ungadibanisa u-1 kumanani omabini ukuze ufumane u-436 - 80.
Ukuba ungasenza ngokulula isixa, yenza isixa.
Ukuba akunjalo, wenza inani lesibini libe ngamashumi ali-100. Jonga la manani mabini adlulileyo kwaye ubone ukuba kufuneka udibanise ntoni ukuze uphele ngo-00. Yongeza eli nani kuwo omabini amanani uze ubhale phantsi isixa esitsha. Kulo mzekelo, ungadibanisa ama-20 kumanani omabini uze ufumane ama-456 - 100 (ekunika ama-356).
Ukuba isiphumo sakho asikabi lula, qhubeka-yenza inani lesibini libe kukuphindaphinda i-1,000, emva koko i-10,000, emva koko i-100,000 njalo njalo de ube uyakwazi ukulisusa ngokulula inani lesibini. (Uya kuba nelishwa lokufuna ukwenza oku!)
Iintlobo ze-salter harris fracture
Ukudibanisa kunye nokuthabatha amanani angalunganga
Kusenokufuneka ujongane namanani amancinci angenanto kuvavanyo lokubala. Azinzima ukuba uthatha umoya ophefumlayo kwaye ucinge ngazo ngononophelo!
Ukongeza okanye ukuthatha kude kwinani elingelilo, cinga ngenani lokuqala njengobushushu bakho boqobo, emva koko ufudumele okanye kubanda ngelesibini. Ukusebenza -12 + 5, yiba ngathi ngu -12ºC kwaye ufumane i-5ºC eshushu: ungaphela ngo -7 atC. Ukusebenza phandle -8 - 3, cinga ubushushu be -8ºC ufumana ukubanda kwe-3erC: ungaphela ngo -11ºC.
Ukufumana umahluko phakathi kwamanani amabini amabi nako kulula: kuyafana nokwahluka phakathi kwala manani mabini ukungahoyi imiqondiso yokuthabatha. Umahluko phakathi kwe –3 kunye no-7 ngu-4, ngokufanayo nomehluko phakathi kwe-3 kunye ne-7.
Indlela elula yokufumana umahluko phakathi kwenani elichazayo nelingathandekiyo kukushiya uphawu lokuthabatha kunye nokudibanisa amanani kunye. Umahluko phakathi ko-5 no-5 uyafana no-5 + 5 = 10.
Okokugqibela, ukuthatha inani elikhulu kude nenani elincinci yinto onokuyenza usebenzisa iiresiphi zokususa ngaphambili: wenza isilinganiselo ngendlela engeyiyo ngeenxa zonke (umzekelo, ukuba bekufuneka wenze i-15 - 20, uya kusebenza uphume 20 - 15), kwaye ubeke uphawu lokususa phambi kwempendulo yakho. Kulo mbuzo, impendulo ngu-5.
ukujonga iziyobisi okuninzi
Iziphumo ebezingalindelekanga zelorazapam
qhagamshela i-samsung tablet kwi-tv
ungathatha i-advil kunye ne-tylenol
izinto zevector zezi